महिला र पुरुष एक अर्काका परिपुरक हुन्, प्रतिस्पर्धी हैनन - hastalikhit.news
हस्तलिखित August 14, 2019 August 15, 2019
लैंगिक असमानताका कुरा गर्दा समाज या पुरुषमा मात्र हामी समस्या देख्छौँ । समस्या हाम्रो दृष्टिकोणमा छ । अहिले दौड हेर्दा लाग्छ पुरुष र महिला दुई भिन्न समाज हुन र तिनका बीचमा समानता हैन प्रतिस्प्रधा चलिरहेको छ । “समानता खोज्ने कि प्रतिस्पर्धी बन्ने”? यो प्रश्न नै यो लेखको अन्तर्वस्तु हो ।
“महिला र पुरुष एक अर्काका परिपुरक हुन् , प्रतिस्पर्धी हैनन” । हामी समाजका कुरा गर्छौ अनि परिवर्तनका कुरा गर्छौ तर परिवर्तन के मा हुन जरुरी छ हामीलाई ज्ञात छैन । हामी स-साना कुराबाटै पछि परेका छौँ धकेलिएका छौँ त्यसैले ती साना भनिएका कुरामा नै हाम्रो दृष्टिकोण बदल्न जरुरी छ । “महिला र पुरुष एक अर्काका परिपुरक हुन् प्रतिस्पर्धी हैनन ” । पढेलेखेको ,देख्दा भलाद्मी देखिने कुनै पुरुष घरबाहिर कतै कार्यक्रममा गएर ‘समानता’ हरेक क्षेत्रमा समान महिला सहभागीता,आरक्षण का बारेमा घण्टौसम्म गहकिला तर्क गर्न सक्छ तर उ आफ्नै परिवारमा त्यो कुरा ‘लागु’ गर्न सक्दैन उ आफ्नो श्रीमतिले घर गृहस्थिमा गर्ने साना ठुला कामलाई सम्मान गर्न सक्दैन । हुनत अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा महिलाहरु गृहस्थी चलाउनको साथ साथै घर बाहिर आफ्नो काम(जागिर) मा पनि उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छन् ,आत्मनिर्भर छन् । तर कुनै महिलाले घरपरिवारको रेखदेख गरेर घरबाहिर पनि आफुलाई स्थापित गर्न सक्छिन भने, पुरुषले घरबाहिर को काम गरेर घरको काममा महिलालाई सहायता गर्न किन सक्दैनन् ?
“श्रीमतीले (महिलाले) परिवारको श्रीमानको राम्रो हेरचाह गर्दा सम्मान पुर्ण व्यबहार गर्दा उ असल बुहारी कहलिन्छे भने छोराले (पुरुषले ) श्रीमतीलाई सपोर्ट गर्दा उसको हेरचाह गर्दा सम्मान दिँदा , उसलाई ‘जोईटिङ्ग्रे ‘ को संज्ञा किन दिन्छ समाज? महिला र पुरुष एकले अर्कालाई बराबर सम्मान र सहायता गर्न किन नहुने??2” छोरी बुहारिमा भिन्नता देख्ने समाजको दृष्टिकोण ” समाजमा समानता को बिषय छोरी र बुहारी को हकमा बिलकुलै फरक छ ।
छोरिका लागि ! छोरिका सपना पूरा गर्न सपोर्ट गर्ने,छोरिलाई ईज्जत अनि प्रेम दिने ज्वाइँ अर्थात (केटा) यो समाजका प्रत्येक बाबुआमाले खोज्छन् तर बुहारीलाई प्रेम अनि ईज्जत दिने उसका सपना पूरा गर्न सपोर्ट गर्ने छोरा यो समाजले रुचाउँदैन । छोरिका सपना पूरा हुँदा छोरिले उसको परिवार, श्रीमानबाट साथ सहयोग र माया पाउँदा आहा! मेरो छोरी कती भाग्यमानी रैछे, ज्वाइँ देउता(भगवान ) जस्तै छन् भनेर ज्वाईलाई देउताको दर्जा दिने बाबुआमाले बुहारीलाई भाग्यमानी महसुस गर्ने अवसर किन दिदैनन? बुहारीलाई राम्रो व्यबहार गर्दा छोरा लाई जोईटिङ्ग्रे देख्ने समाजले छोरिले सुख पाउँदा ज्वाईलाई भगवान को दर्जा किन ?
यहि हो समस्या ,समाजमा सानातिना भनिएका यस्तै कुरामा हामिले आफ्नो दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्न नसकेर हाम्रो समाज पछि परेको हो । हामी को बाट परिवर्तन को अपेक्षा गरिरहेका छौँ?हामिले आफ्नै दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुँन जरुरी छ भनेर कहिले देख्ने? अन्त्यमा, महिला र पुरुष एक अर्काका परिपुरक हुन् प्रतिस्पर्धी हैनन ! एक अर्काको प्रतिस्पर्धी बन्न तिर नलागौँ । र समाजमा प्रत्येक घरमा छोरिलाई जस्तै बुहारीलाई पनि समानुभुतिपुर्ण व्यबहार गर्ने हो भने कुनै पनि बाबुआमाले आफ्नो छोरिको भविष्यप्रती त्यति धेरै त्रसित बन्नु पर्ने थिएन ।
लेखिका सत्या समाजिक तथा लैंगिक समानताका विषयमा लेख्दै आएकीछिन् ।
Tagged hastalikhit, hastalikhit nepal, hastalikhit.com, Hastalikhit.news
बुद्ध मूर्ति तोड्फोड गर्नु अति नै निन्दनीय कार्यः विवेकशील नेपाली दल
कश्मिर संकटः सुरक्षा परिषदमा चीन भारतको विपक्षमा उभियो